အောင်မြေမန္တလာ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်ခန်းပေါင်း ၂၆ဝ ကို မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း နေရာ ချ - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည့် အောင် မြေမန္တလာနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ တိုက်ခန်းပေါင်း ၂၆ဝ ကို မကြာ မီရက်ပိုင်းအတွင်း နေရာချထား ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်း ဒေသကြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”လက်ရှိ အခန်းတွေအား လုံးပြီးစီးသွားပါပြီ။ မီတာဘောက်နဲ့ မီးကမရသေးတော့ ချထား ပေးဖို့ အချိန်ကြန့်ကြာနေတာပါ။ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ချထားပေးမှာပါ။ နေရေးအခက် အခဲရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် နှစ်စဉ်အိမ်ရာတွေဆောက်လုပ် ပေးနေသလို ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ အိမ်ရာတွေမှာလည်း အမြန်ဆုံး နေထိုင်နေကြပါပြီ”ဟု တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသက်နိုင်က ပြောသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတွင် နေထိုင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားသူဦးရေမှာ တစ် ထောင်ကျော်ရှိသော်လည်း လျှောက်ထားဆဲကာလမှာပင် ပြောင်းရွှေ့သွားသူများ၊ နုတ်ထွက် သွားသူများနှင့် အငြိမ်းစားယူသွားကြသူများ၏စာရင်းကို ပြန်လည်စိစစ်ပယ်ဖျက်သွားပါက လျှောက်ထားသူဦးရေလျော့ကျ သွားမည်ဖြစ်သည်။
”ယခင်လက်ကျန်လျှောက်လွှာက အစောင် ၄၈ဝ ရှိပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လာရောက် လျှောက်ထားတဲ့လျှောက်လွှာ ပေါင်း ၅၂၉ စောင်ရှိပါတယ်။ ဒီလျှောက်လွှာတွေကို ရုံးအဖွဲ့ တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေပါတဲ့ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအတိုင်း စိစစ် ရွေးချယ်နေတဲ့အတွက် မကြာမီ နေထိုင်ခွင့်ရသူတွေကို ကြေညာ ပေးသွားမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အောင်မြေမန္တလာနိုင်ငံ့ဝန် ထမ်းအိမ်ရာတွင် မန္တလေးခရိုင်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ ကြသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနက် ဝင်ငွေနည်းဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်၍ နေရာချထားပေးသွား မည်ဖြစ်ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၅၆၁၆၂ ဦးရှိရာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် အိမ်ရာတိုက်ခန်းမှာ ၃ဝ၃ဝ သာရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ရွှေဘိုဒေသ၌ သဖန်းဆိပ် ဆည်ရေဖြင့် စိုက်ပျိုးခဲ့သော နွေစပါးများ စတင်ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ဈေးေ
အဟံ - မန္တလေး (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ခြောက်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရှင်သာမဏေ အပါး ၁ဝဝဝ ကို လှူဖွ?
ထိုင်းအေဂျင်စီများက လစဉ် ဘတ်သိန်း ၆ဝဝ ခန့်အထိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံမှ ငွေကြေး အြ??
ထိပ်ဆုံးခြောက်သင်း စာရင်းဝင်ဖြစ်ရန် ဟာနန်ဒက်ဇ် ရည်မှန်း
လှိုင်မြို့နယ်တွင် သမီးဖြစ်သူ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရသည်ကို ကြားသိ၍ မိခင်ဖြစ်သူ ၀မ်းသာပြီး ရုတ်တရ??